गान्धारीले किन आफ्ना पुत्र दुर्योधनलाई नि’र्वस्त्र हेर्न चाहन्थिन् ? – Jagaran Nepal
गान्धारीले किन आफ्ना पुत्र दुर्योधनलाई नि’र्वस्त्र हेर्न चाहन्थिन् ?
पौराणिक शास्त्रअनुसार गान्धारी भगवान शिवकी परम भक्त थिइन् । भगवान शिवको तपस्या गरेपछि उनले यस्तो वरदान पाएकी थिइन् कि यदि उनले आँखा को पट्टीखोलेर कसैलाई न’ग्न देखेमा न’ग्न व्यक्तिको शरीर व’ज्र समान हुनेछ।गान्धारी महाभारतकी एक प्रमुख पात्र हुन् । पिता गान्धार नरेश सुबलले गान्धारी लाई हस्तिनापुरका महाराज धृतराष्ट्रसँग विवाह गराइदिएका थिए । जबकि धृतराष्ट्र दृष्टिविहीन थिए ।यो कुरा थाहा पाएपछि गान्धारीले श्रीमतीको धर्म निर्वाह गर्दै आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेकी थिइन् र जीवनभर नेत्र’हीन हुने संकल्प गरेकी थिइन् । गान्धारीको ग’र्भबाट सय पुत्र एवं कौरवको जन्म भएको मानिन्छ ।
गान्धारीको जेठा छोरा थिए, दुर्योधन । उनी एकदमै अ’हंकारी थिए । अतः गान्धारी पुत्र दुर्योधनको बलवान भीमसँग यु’द्ध हुने तय भइसकेको थियो । त्यही कारण गान्धारी चाहन्थिन् कि पुत्र दुर्योधनको सम्पूर्ण शरीर व’ज्र समान होस् । कुनै किसिमको प्रहारले उनको शरीरमा क्षति पुर्‍याउन नसकोस् । यसैअनुसार गान्धारीले दुर्योधनसँग भन्छिन्, ‘म तिमीलाई विजयश्रीको आर्शीवाद त दिने छैन । यद्यपि यो शिव भक्तिनीले तिमीलाई एक कवच पहिर्‍याइदिने छन् । हे पुत्र गंगामा गएर स्नान गरेर आउनु । त्यहाँबाट तिमी सोझै मकहाँ आउनु । त्यसबेला तिमी त्यस्तै स्वरुपमा आउनु जतिबेला जन्मिएको बेला थियौ ।’
तब दुर्योधन सोध्छन्, ‘नग्न माताश्री ?’ गान्धारी भन्छिन्, ‘आमाको अगाडि के को लाज ? जाउ स्नान गरेर निर्वस्त्र आउनु ।’ दुर्योधन आफ्नी माताको आज्ञा पालना गर्दै स्नानका लागि गंगातर्फ लाग्छन् । गंगा स्नानपछि सर्वाङ्ग फर्किरहेका दुर्योधन सँग श्रीकृष्णको जम्का भेट हुन्छ । श्रीकृष्णले उनी सर्वाङ्ग हुनुको राज थाहा पाइसकेका हुन्छन् । त्यसैले श्रीकृष्ण भन्छन्, ‘बा’ल्यकालको कुरा अर्कै थियो । अहिले तिमी जवान भइसकेका छौं ।यो उमेरमा यसरीनग्न भएर माताको सामुन्ने जानु अनुचित हो ।’तब दुर्योधनले रुखका पात टिपेर आफ्नो यौ’नाङ्ग छोप्छन् । यसरी नै उनी माता गान्धारीको अगाडि पुग्छन् ।
गान्धारी भन्छिन्, ‘मैले हरक्षण आफ्नो आँखा बन्द गरेर राखें । अब केही समयका लागि आँखाको पट्टी खोल्दैछु । मैले तिम्रा भाइ हरूलाई त देख्न सकिन । तिमीलाई भने आज हेर्दैछु ।’तब गान्धारीले आफ्नो आँखाको पट्टी खोल्छिन् । उनको आँखाबाट निस्किएको ज्योतिपुञ्ज दुर्योधनको शरीरमा पर्छ। तर, गान्धारीले देख्छिन् कि दुर्योधनले आफ्ना यौनाङ्ग भने खुला राखेका छैनन् । तब उनले छोरालाई यसबारे प्रश्न गर्छिन् ।दुर्योधन भन्छन्,‘म सम्पूर्ण रुपमा नग्न भएर कसरी तपाईंको सामुन्ने आउन सक्छु म त ?’
दुर्योधनको कुरा सुनेर गान्धारी निकै दुःखी हुन्छिन् । उनी भन्छिन्,‘मैले तिम्रो शरीरलाई जति नग्न देखेँ, त्यो वज्र समान भयो । यदि तिमीले ठूलाको आदेश मान्ने परम्परा लाई नभुलेको भए तिमी अजेय हुन्थ्यौं ।’तब प’छुतो मान्दै दुर्योधन भन्छन्, ‘त्यसो भए म यो पात हटाइ दिन्छु माता ।’गान्धारी भन्छिन्, ‘अब त्यसको कुनै अर्थ छैन । मैले जुन बखत पट्टी खोलेर तिमीमाथि दृष्टि राखेँ, त्यसमा मेरो भक्ति आफ्नो सतित्व र आफ्नो ममताको सम्पूर्ण शक्ति मिलाइदिएकी थिएँ पुत्र ।’